ठूला कारोबारीलाई टोकन सिष्टम, लगानी डुब्न नदिने प्रतिबद्धता
सुनसरी । बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. धरानले सहजरुपमा कारोबार गर्न थालेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण आर्थिक तरलता व्यहोरिरहेको सहकारीले बचतकर्ताहरुलाई २ दिन यता टोकन प्रणालीमा भुक्तानी गरिरहेको छ ।
केही दिनयता ‘बराह सहकारीले बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्न सकेन’ भन्दै सञ्चार माध्यमहरुमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । बराह ग्रुप, बराह सहकारीमा वित्तीय समस्या आएको अभिप्रायका सन्देशहरुले बचतकर्ताहरुमा भ्रम सृजना भएकोले उनीहरु एक्कासी बचत फिर्ता लिन आउँदा समस्या भएपनि हिजोबाट बचतकर्ताहरुले सहजरुपमा भुक्तानी पाइरहेको सहकारीका अध्यक्ष मानबहादुर दियालीले बताए ।
‘हामीले धेरै ठाउँहरुमा कर्जा प्रवाह गरेका थियौं । लामो समयदेखिको लकडाउनले आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प हुँदा कर्जा असुलीमा थोरै समस्या आएको हो । केही ठूला कारोबारीहरुलाई रकम भुक्तान गर्न नसकिए हामीले प्रवाह गरेको कर्जा असुलीमा टीम नै लागि परेकोले स्थिति सामान्य हुँदै गएको छ ।’ अध्यक्ष दियालीले भने ।
सहकारीले ७२ करोड भन्दा बढी कर्जा लगानी गरेको तर, समयमै कर्जा असुली गर्न सहजता नहुँदा मात्र समस्या देखिएको बताएको छ । अहिले कर्जा असुली र व्यवस्थापनमा सञ्चालक समिति सक्रिय भएसँगै वित्तीय कारोबारमा सुधार आएको छ । ‘जुनसुकै वित्तीय संस्थामा एक्कासी सयौं बचतकर्ताहरु बचत निकाल्न आउँदा समस्या नहुने कुरा हुन्न । तथापि, हामीले बचतकर्ताहरुलाई अफ्टेरोमा पार्ने काम गरेका छैनौं ।’ अध्यक्ष दियालीले भने ।
दियालीले शेयर सदस्यहरुले गरेको लगानीको सुरक्षा संस्थाले गर्ने बताए । संस्थागत लगानीबाटै शेयर सदस्य र लगानीकर्ताहरुको लगानी भुक्तानी गर्ने तथा त्यसबाट असुल हुन नसके सञ्चालकहरुको व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट समेत पुर्ति गर्ने समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सहकारीमा देखिएकाे समस्या वित्तीय समस्या हल गर्न राष्ट्रिय सहकारी संघ लगायत नियामक निकायसँग सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडी बढ्ने अध्यक्ष दियालीले जनाए ।
बराहमा साना बचत कर्ताहरुलाई कारोबारमा कुनै रोकतोक छैन । ५० हजार माथीको कारोबार गर्नेहरुलाई भने टोकन सिष्टममा भुक्तानी गरिरहेको बताएको छ । ‘सहकारीमा रहेको खाता नै बन्द गरेर पैसा निकाल्न कोही पनि आउनु भएको हैन । कतिपय बचतकर्ताहरु आफैं कन्भिन्स भएर जानु भएको छ । एकाध दिनमा हाम्रो वित्तीय सुधार हुन्छ ।’ बराह ग्रुपका मिडिया कोअर्डिनेटर प्रमोद पोर्तेल भन्छन् ।
अध्यक्ष दियालीले ठूला शेयर सदस्य तथा बचतकर्ताहरुलाई संयमित भएर बराहलाई विस्वास गर्न अनुरोध गरेका छन् । मुलुक नै वित्तीय संकटमा रहेको अवस्थामा बराह त्यसबाट चोखो नरहेको प्रष्ट्याउँदै केही दिनभित्रै सबै समस्या समाधान भएर जाने विस्वास दिलाए । ‘बराहप्रति तपाईंहरुको जुन विस्वास छ त्यसलाई गुमाउने कार्य हामी कदापी गर्दैनौं ।’ दियालीले भने ।
एक साता अगाडी मात्रै सहकारीले १२ औं साधारणसभा गर्दै आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ३ करोड बढी मुनाफा कमाउन सफल भएको साथै, शेयरसदस्यहरुलाई १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने पनि जनाएको थियो । साधारणसभामा संरक्षित पूँजी फिर्ता कोष र शेयर लाभांश कोष गरी १५ प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गर्ने भनिएको थियो ।
धरानमा बराह ज्वेलरी इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. अन्तर्गत भानुचोक र धनकुटे रोडमा करोडौंको सपिङ कम्पलेक्स छ । काठमाडौंको न्यूरोड, पोखराको चिप्लेढुङ्गा र चितवनको नारायणघाटमा समेत कम्पनीका शाखाहरू छन् । स्वदेशवाहेक विदेशमा हङकङको जोर्डन, दुबई र बेलायतको अल्डरसटमा पनि शाखा रहेका छन् ।
बराह सहकारीले करिब ५ हजार ११७ शेयर सदस्यबाट रकम संकलन गर्दै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । वार्षिक साधारणसभामा सहकारीले ३ करोड ६७ लाख ३२ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ ८० पैसा मुनाफा गरेको बताइएको थियो ।
संस्थाको शेयर पुँजी १० करोड २९ लाख १६ हजार ५ सय रुपैयाँ, जगेडा कोषमा ३ करोड २८ लाख ८० हजार ९ सय ८७ रुपैयाँ ४३ पैसा, निक्षेप सङ्कलन ७२ करोड १९ लाख ८४ हजार ६ सय ४४ रुपैयाँ ३४ पैसा र ऋण लगानी ७९ करोड ३२ लाख ४४ हजार ८ सय २९ रुपैयाँ ८७ पैसा गरेको जनाएको छ ।
www.vision Nepal .com
बराहा सपिङ्ग सेन्टर ,बराह ज्वेलरिकाे उन्नति प्रगति र सफलताको कामना गर्दछु ।लगानीकर्ता ले चित्तबुझ्दो तरिकाले लाभांश लिन सकुन् ।ब्यबसाय उन्नति मा वृद्धि हाे।सबै काे सद्भाव हुनु जरुरी छ।